कठै ! क्याफे लान्छु भनेर कोठा लगी ब लात्कार गरे,अहिले यी युवतीको यस्तो छ हालत (भिडियो हेर्नुस्) -
Home News कठै ! क्याफे लान्छु भनेर कोठा लगी ब लात्कार गरे,अहिले यी युवतीको...
कठै ! क्याफे लान्छु भनेर कोठा लगी ब लात्कार गरे,अहिले यी युवतीको यस्तो छ हालत (भिडियो हेर्नुस्)
आफुलाई ब’ला’त्कारको प्र’या’स गरे पछि आफ्नो घर अगाडि आएर बोलाउने र भेट्न नगए बेइ’ज्ज’त गर्दिने, मा’र्ने सम्मको ध’म्की दिएको भन्दै एक १९ वर्षीय युवती मिडियामा आएकी छिन ।
नाम ठेगाना नखुलाइएको ती युवती आफू फाइनान्समा काम गर्दै आएको बताउँछिन । बाबू बितिसके पछि आमा र भाईको साथमा काठमाडौमा बस्दै आएकी उनी फाइनान्समा कलेक्सनको काम गर्छिन । त्यही काममा पैसा संकलन गर्न जाने क्रममा भेटिएका एक ब्य’क्तिले आफुलाई यस्तो गरेको उनको भनाइ छ ।
लगनखेलको इ’टि टोलमा रहेको सैलुनमा संकलनका लागि जाने क्रममा त्यही सैलुनका मुकेश पाण्डे नाम गरेका ती ब्याक्तिसगँ चिनजान पछि साथी बनेको ती युवतिले बताईन । करिव ४ महिना त्यसरी दिनहुँ संकलनमा जाने क्रममा साथी बनेका मुकेश बिबाहित हुन र उनको छोराछोरी पनि रहेको आफुलाई पहिले नै थाहा भएको ती युवतिको भनाई छ ।
आफू सैलुनमा संकलनका लागि जादाँ एक दिन मुकेशले आफुले सै’लु’न छो’ड्’न लागेको बताए । किन छोड्न लाग्नु भएको भनी आफुले सोध्दा बसेरै कुरा गरौँला भनी उनले भनेका थिए । शनिबार आफ्नो छुट्टी भएको दिन मुकेशले क्याफे तिर जाम उतै गफ गरौ भनी आफुलाई म्यासेज गरि बोलाए पछि आफू र आफ्नो एक साथि आउने मुकेशलाई बताएको उनको भनाई छ ।
मुकेशले पनि उस्को एक साथी आउने भनी आफुलाई लिन आए पछि आफू सगैँ गएको उनले बताईन । आफुलाई मुकेशले साथिको कोठामा लगेपछी किन क्याफे जाने भनेर यहाँ ल्याएको भन्दा साथिहरु आएपछी जाने भनी मुकेशले उस्को साथिलाई मेरो साथी लिन पठाएको ती युवतिले बताईन ।
मुकेशको साथी बाहिर गए पछि भने मुकेशले आफुलाई जताभाबी छुने गरेको उनको भनाई छ । मुकेशको त्यो ब्यबहार भए पछि आफ्नो साथी आए पछि क्याफे नजाने भए आफुहरु घर जाने बताईन । तर मुकेशले अब क्याफे नजाम हामी घर पुर्याइदिन्छु भन्दै त्यहा रक्सी खाएको उनले बताईन ।
आफुहरु त्यहा बस्न नमाने पछि आफ्नो साथिलाई मुकेशको साथिले घर पुर्याउन गएको र आएर आफुलाई पनि घर पुर्याइदिने भने पछि आफू केहिबेर त्यहा बस्दा मुकेशले फिलिङ्स आयो भन्दै आफ्नो स्त’न छु’ने, क’प’डा खो’ल्न खोज्ने र हात समातेर ब’ला’त्का’र’को प्र’यास गरेको बताईन ।
आफू उस्लाई हटाएर त्यहाँबाट भागेपछी बाटोमा मुकेशको साथी भेटिएको र उस्लाइ सबै कुरा भने पछि उसैले आफुलाई घर पुर्याइदिएको उनले बताईन । त्यस पछि पनि मुकेशले आफुलाई बारम्बार धम्की दिने गरेको उनको भनाई छ । आफू घरमा भएको बेला आफ्नो घर बाहिर आएर बाहिर ननिस्किए घरमा, टोलमा आफ्नो बे’इ’ज्ज’त गरिदिने भन्दै आफुलाई ध’म्का’एर भेट्न बोलाउने गरेको उनले बताईन । साथै प्र’हरिमा गए आफू जेलबाट निस्किएर मा’र्ने ध’म्की पनि दिने गरेको ती युवतिले बताईन ।
Previous articleपेट फुलिएका श्याम उपचार अब बाँच्ने आशा पलायो ,आफन्त कसैले गरेनन सहयोग १२ वर्ष पछिको खुशी हेर्नुस् (भिडियो)
Next articleमुना मदनको जस्तो जोडी,प्रेम विवाहपछिको ६ वर्षमा छोराछोरी नभएपछि अर्कोसँग सल्किइन् (भिडियो हेर्नुस्)